Maitiro ekudzima ayo anonakidza tweets pa Twitter | IPhone nhau
Maitiro ekudzima ayo anotonhorera tweets pa Twitter
Mukuyedza kufadza vatsva kana vangangove vashandisi, Twitter Inc. iye cag **** irikuita shanduko kune yayo inozivikanwa network ye microblogging. Dzimwe shanduko idzi dzakanyanya kunaka, senge sarudzo nyowani yekutumira maGIF, hurukuro dzeboka kana ongororo, asi kune zvimwe zviitiko izvo kune vazhinji vashandisi (kusanganisira ini) zvisina maturo zvinoparadza kukwezva kwakawanda kweiye watinoda Twitter . Imwe yeaya matsva ndeyekutiratidza iyo Tweets zvakashata, iyo inozivikanwa se "Pawanga usipo."
Neraki, iyi sarudzo nyowani inogona kuremara. Nehurombo, zvirinani kwandiri kuti ndinofanira kutarisa Twitter kuburikidza newebhu nguva nenguva, iyi sarudzo inoita chero chainoda uye kunyangwe mushure mekuimisa, inoramba ichingobuda. Chero zvazvingaitika, mune iri diki dhaidhi isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekudzima sarudzo zvese paTwitter yeIOS uye mune yayo yewebhu vhezheni.
1 Maitiro ekuremekedza "Pawanga usiri kure" kubva paTwitter
1.1 Twitter yeIOS
1.2 Web version
Maitiro ekuremekedza "Pawanga usiri kure" kubva paTwitter
Sezvazvinowanzoitika mukushandisa kwechizvarwa, iyi sarudzo haina kuvanzika, asi haisi iyo nzira ipfupi kwazvo pasirese. Tichazvidzivirira nekuita zvinotevera:
Zvine musoro, isu tinovhura iyo application kubva kune iyo iPhone, iPod Kubata kana iPad.
Takatamba pa Akaunti, iri pazasi kurudyi.
Tevere, tinobata iyo giya chiratidzo.
Pakati pesarudzo dzinoonekwa, tinobata Setup.
Isu tinosarudza iyo account yatiri kuda kumisa iyo sarudzo.
Takapinda Nguva yekugadzirisa.
Pakupedzisira, tinobvisa sarudzo «Ndiratidze maTweets akanakisa kutanga».
Iyo yewebhu vhezheni haina kuvanzika zvakadaro asi isu tinokuratidzawo maitiro ekuimisa. Tichafanirwa kuita zvinotevera:
Dai isu tisina kudaro, isu tinoenda kune iyo Twitter peji uye tizvizivise isu pachedu.
Tinodzvanya avatar yedu kumusoro kurudyi.
Tevere, tinobaya pane Zvirongwa.
Isu tinodongorera pasi uye kumisa bhokisi rinoti "Ndiratidze maTweets akanakisa kutanga."
Tinodzvanya paChengetedza Shanduko.
Pakupedzisira, patinokumbirwa password, tinopinda uye tinogamuchira.
Uye, zvakanaka, nematanho akareruka isu tinogona kuramba tichinakidzwa neTwitter sezvazvinofanira kuva, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima ayo anotonhorera tweets pa Twitter
Apple inogona kutengesa isingasviki 200M iPhones muna 2016
Apple inoshandisa nziyo makumi mana kupemberera makore makumi mana ekuvapo